अर्बपति बिल गेट्स र मेलिन्डाले अन्त्य गरे २७ वर्षको वैवाहिक सम्बन्ध
कुनै बेला संसारकै धनी व्यक्ति रहेका बिल गेट्स अहिले पनि संसारकै चौथो धनी व्यक्ति हुन्। फोर्ब्स म्यागजिनका अनुसार उनीसँग अहिले १२४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति छ।
बिल गेट्स र मेलिन्डाले विवाहको २७ बर्षपछि किन गरे सम्बन्ध विच्छेदको फैसला ? यस्तो छ कारण
Artha Dabali2दिन पहिले
बिल गेट्सको डिभोर्स
माइक्रोसफ्टका संस्थापक ६५ वर्षीय बिल गेट्स र उनकी पत्नी मेलिन्डा गेट्सले डिभोर्स गर्ने घोषणा गरेका छन् । विवाहको २७ वर्षपछि उनीहरुले डिभोर्स घोषणा गरेका हुन् । जीवनको आगामी चरणमा अब एकसाथ अघि बढ्न नसक्ने उनीहरुले बताएका हुन् ।बिल र मेलिन्डाले सामाजिक सञ्जालमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सोच–विचार र आपसी छलफलपछि यस्तो निर्णय लिइएको जनाएका छन् । ‘पछिल्ला २७ वर्षमा हामीले तीन बच्चालाई हुर्काएका छौं । हामीले एउटा परोपकारी फाउन्डेशन पनि बनाएका छौं, जसले विश्वभरका मानिसको स्वास्थ र राम्रो
बीबीसी । माइक्रोसफ्ट कम्पनीका मालिक बिल गेट्स र पत्नी मेलिन्डाले विवाहको २७ वर्षपछि डिभोर्स गर्ने निर्णय सुनाएका छन् । विवाहित जोडिका रुपमा अब आफूहरु अघि बढ्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले ट्विटरमा यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनीहरुको पहिलो भेट माइक्रोसफ्टको फर्ममा १९८० को दशकमा भएको थियो । यो अर्बपति जोडीका तीन छोराछोरी...
बाह्रखरी3दिन पहिले
बिल गेट्स र मिलिन्डा गेट्सद्वारा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने घोषणा
काठमाण्डाै / माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स र उहाँकी पत्नी मिलिन्डा गेट्सले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने घोषणा गरेका छन् । धनाढ्य दम्पतीले २७ वर्ष लामो वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका बीबीसीले जनाएको छ । बिल गेट्स र मिलिन्डाले आफूहरुको लामो छलफलपछि अलग हुने निर्णय लिएको सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् । विश्वकै धनी व्यक्तिमध्येका एक ६५... The post बिल गेट्स र मिलिन्डा गेट्सद्वारा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने घोषणा appeared first on Purbeli News.
Purbeli News3दिन पहिले
विवाहको २७ वर्षपछि बिल गेट्स र मेलिन्डा गेट्सको सम्बन्धविच्छेद
विश्वकै धनाढ्य बिल गेट्सले आफ्नो श्रीमती मेलिन्डासँग सम्बन्धविच्छेद गरेको जनाएको छ। विवाहको २७ औं वर्षमा सल्लाह गरेरै सम्बन्ध विच्छेद भएक गेट्सले ट्वीटरमार्फत जनाएका छन्। pic.twitter.com/padmHSgWGc — Bill Gates (@BillGates) May 3, 2021 सम्बन्ध विच्छेद भए पनि बिल एन्ड मेलिन्ड गेट्स फाउन्डेसनमा भने मिलेर काम गर्ने उनले बताएका छन्। यो सहयोगी…
वासिङटन, बैशाख २१ । माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सले विवाहको २७ वर्षपछि आफ्नो वैवाहिक यात्रा टुङ्ग्याउने निर्णयमा पुगेका छन्। धेरै प्रयास गर्दा पनि पत्नी मेलिन्डा गेट्सँग सँगै बस्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै दुवैले वैवाहिक यात्रा टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको ट्वीटर मार्फत् जानकारी दिएका छन्। ‘धेरै लामो समयसम्मको वैचारिक मन्थन तथा हाम्रो सम्बन्ध सुधारमा धेरै कार्यपछि अन्ततः हामीले […]
Reporters Nepal3दिन पहिले
विश्वकै धनी बिल गेट्स र उनकी पत्नी मिलिन्डा गेट्सको सम्बन्धविच्छेद भएको छ । माइक्रोसफ्ट कम्पनीका संस्थापक समेत रहेका बिल गेट्सले विवाह बन्धनमा बाँधिएको २७ वर्षपछि सम्बन्धविच्छेद गरेका हुन् । उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूहरु अलग्गिएको घोषणा गरेका थिए । उनले लेखेका छन्, “लामो छलफलपछि हामीले हाम्रो वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य गर्ने घोषणा गर्यौँ । २७ वर्षमा आफ्ना तीन सन्तानलाई पालनपोषण गरेर ठूलो बनायौँ । हामीले विश्वभरका मानिसहरुको उत्कृष्ठ कामको लागि फाउन्डेशन पनि बनायौँ । हामी
२७ वर्षको वैवाहिक जीवन अन्त्य गर्ने बिल गेट्स दम्पत्तीको घोषणा
माइक्रोसफ्ट (एमएसएफटी) का सह संस्थापक तथा अरबपति बिल गेट्स र उनकी श्रीमती, मेलिंडाले डिभोर्स गर्ने भएका छन् । वैवाहिक जीवन सुरु गरेको २७ बर्षपछि उनीहरुले सँगै नबस्ने निर्णय गरेका छन् । बिल गेट्सले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै वैवाहिक जीवनको अन्त्य गरेको घोषणा गरेका छन् । गेट्सले वैवाहिक जीवन अन्त्य गरेपनि विश्वव्यापी परोपकारी काममा भने […]
नेपाल समाचारपत्र3दिन पहिले
एजेन्सी। माइक्रोसफ्ट कम्पनीका संस्थागत बिल गेट्स र उनकी पत्नी मेलिन्डा गेट्सले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय गरेका छन्। उनीहरुले भनेका छन्, ‘हामीलाई अब एक साथ अघि बढ्न सक्छौं जस्तो लाग्दैन। २७ वर्ष लामो वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य गर्ने निर्णयमा पुगेको उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन्। उनीहरुको नाममा रहेको बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनका लागि भने एकसाथ काम गर्ने जनाएका छन्।
काठमाडौं । सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो । वर्षे अधिवेशन बोलाउने बेला भएकाले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुपरेको सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।सरकारको हिउँदे हिउँदे अधिवेशन फागुन २३ देखि सुरु भएको थियो । हिउँदे अधिवेशन चलेपनि संसद प्रभावकारी हुन नसकेको टिकाटिप्पणी हुँदै आएको थियो ।
Ratopati 17 दिन पहिले